ပိပိရိရိ ဟန်ဆောင်ကောင်းလွန်းတဲ့ ကျော်ကျော်တို့ ချစ်သူနှစ် ဦးရဲ့ နောက်ကွယ်က အရှုပ်တော်ပုံတွေ ကိုအောက်ဖဲလှန်ချလိုက်တဲ့ သင်ဇာမြင့်မိုရ် – Shwe Likes
Shwe | May 22, 2022 | Celebrity | No Comments
ခပ်မိုက် မိုက် ပုံရိပ်လေးေ တွနဲ့ အတူ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေ ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာ ကတော့ သင်္ဇာမြင့်မိုရ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမ ကတော့ ပရိသတ် အားပေးမှုေ တွနဲ့ အောင်မြင် နေတဲ့ သူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အလှ ပုံရိပ်လေးေ တွကို အမြဲ ရိုက်ကူးပြီး လူမှုကွန်ရက်မှာ တင်ပေးလေ့ ရှိတာပါ။
လူမှု ကွန်ရက်မှာ ပုံရိပ်လေးေ တွ အမြဲတင်ပေးလေ့ ရှိပြီး ပရိသတ်တွေ နဲ့အမြဲမပြတ် ရှိနေ သူပါ။ အခုမှာတော့ သူမရဲ့ တင်ထားတဲ့ စာလေးတစ် ခုကြောင့် ပရိသတ်တွေ စိတ်ဝင်စားနေ ကြတာပါ။ နာမည်ကြီး မင်းသားတစ်ယောက်ကို ခုလိုပဲအချ က်လက် တိကျစွာပြောဆို လိုက်တာပါ။
မင်းသားတစ်လက် မြင်စေရန်.. ဒါမျိုးတွေ မရေးချင် မပြောချင်သော်လည်း.. ယောက်ျားတန်မယ့် စောင်းချိတ်ပြောဆို ရေးသား တတ်သော .. စောင်တင်းပြောတဲ့နေရာ နာမည်ကြီးသူ ကိုယ်တွဲနေတဲ့ မင်းသမီးချစ်သူလေးက.. မိန်းမကောင်းလေးမို့ ..
သူများသား သမီးတွေကို လာထိ ပါးနေတာလားဟင်?မသိလို့ပါ.. ကျွန်မက.. ရည်းစားတစ်ေ ယာက်နဲ့ပြတ်လို့ တစ်ယောက်တွဲတာ..
(သူများရည်းစား/ သူများယောက်ျား/မိန်းမ) နဲ့.. တွဲနေကြတာ လည်း မဟုတ် .. အစ်ကို့စော်လေးလို.. အစ်ကိုရှိလျက်နဲ့သူများ ပေးစာ ကမ်းစာယူနေ တာမျိုးအစ်ကို ကိုယ်တိုင် ထိုးကျွေးတာမျိုး Ex နဲ့ Date တာမျိုး
လက်ရှိနေထို င်သောနေရာနဲ့ အစ်ကို လိုက်မောင်းနေတဲ့ကားလေးက.. ဘယ်က ရ ထားလဲ? သိလျက်နဲ့ အစ်ကိုရယ်.. အဲဒါကမှ အစ်ကို့နေရာ ဘာလဲ?
ညီမက.. မပတ်သတ်ချင်လို့တောင် Unfriend လုပ်လိုက်ပြီး မကြည့်ပဲနေ တာလေ.. ဘာအကြောင်းမှ စိတ်မဝင်စားလို့ ခုလို ရက်နည်းနည်းကြာမှ သူများပြမှ သိရတော့.. အခုလို အောက်ဖဲလှ န်တာတောင်နော က်ကျသွား လားမသိဘူး..အစ်ကိုအသိ ဆုံးပါနော်..
သင်္ဇာမြင့်မိုရ် ဆိုတာ.. ​ဘယ်သူ့ ပေးကမ်းစာနဲ ့မှ အသက်ဆက်နေတာ မဟုတ်ဘူး.. ကိုယ့်စည်း ကိုယ့်ကမ်းနဲ့ ကိုယ့် ကိုယ်ကျင့်တရား နဲ့ နေလာတဲ့မိန်း မပါ.. မထိခလု တ် ထိခလုတ်နဲ့ –ျင် ထထမယားပါနဲ့.. တန်ရာ တန်ရာတုံ့ပြ န်ပေးလိုက် ပါတယ်ရှင့်..
အေးချမ်းပါေ စနော်..ဪ.. မသိပဲ.. ကိုယ် မှားမှားမှန်မှန် ဘာညာ လာရေးေ နသေးတယ် စုံစမ်းပါဦး အဲ့လင်မယား အကြောင်းလည်း.. ဘယ်အခမ်း အနားတွေ ခိုးတက်ပြီး ဘယ်နှစ်ကြိမ် မ ပြီးပြီလဲ ဆွာ အိပ်ကြပါတော့ဗျာ.. မနက်အလုပ် ပိတ်လည်း.. အိပ်ရေး ဝဝအိပ်ကြပါ.. ဆိုပြီးပြောခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်။ Credit;
ခပ္မိုက္ မိုက္ ပုံရိပ္ေလးေ တြနဲ႔ အတူ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ပုံရိပ္ေလးေတြ ကို ပိုင္ဆိုင္ထားတာ ကေတာ့ သဇၤာျမင့္မိုရ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမ ကေတာ့ ပရိသတ္ အားေပးမႈေ တြနဲ႔ ေအာင္ျမင္ ေနတဲ့ သူတစ္ေယာက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အလွ ပုံရိပ္ေလးေ တြကို အျမဲ ရိုက္ကူးၿပီး လူမႈကြန္ရက္မွာ တင္ေပးေလ့ ရွိတာပါ။
လူမႈ ကြန္ရက္မွာ ပုံရိပ္ေလးေ တြ အျမဲတင္ေပးေလ့ ရွိၿပီး ပရိသတ္ေတြ နဲ႔အျမဲမျပတ္ ရွိေန သူပါ။ အခုမွာေတာ့ သူမရဲ့ တင္ထားတဲ့ စာေလးတစ္ ခုေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြ စိတ္ဝင္စားေန ၾကတာပါ။ နာမည္ႀကီး မင္းသားတစ္ေယာက္ကို ခုလိုပဲအခ် က္လက္ တိက်စြာေျပာဆို လိုက္တာပါ။
မင္းသားတစ္လက္ ျမင္ေစရန္.. ဒါမ်ိဳးေတြ မေရးခ်င္ မေျပာခ်င္ေသာ္လည္း.. ေယာက္်ားတန္မယ့္ ေစာင္းခ်ိတ္ေျပာဆို ေရးသား တတ္ေသာ .. ေစာင္တင္းေျပာတဲ့ေနရာ နာမည္ႀကီးသူ ကိုယ္တြဲေနတဲ့ မင္းသမီးခ်စ္သူေလးက.. မိန္းမေကာင္းေလးမို႔ ..
သူမ်ားသား သမီးေတြကို လာထိ ပါးေနတာလားဟင္?မသိလို႔ပါ.. ကၽြန္မက.. ရည္းစားတစ္ေ ယာက္နဲ႔ျပတ္လို႔ တစ္ေယာက္တြဲတာ..
(သူမ်ားရည္းစား/ သူမ်ားေယာက္်ား/မိန္းမ) နဲ႔.. တြဲေနၾကတာ လည္း မဟုတ္ .. အစ္ကို႔ေစာ္ေလးလို.. အစ္ကိုရွိလ်က္နဲ႔သူမ်ား ေပးစာ ကမ္းစာယူေန တာမ်ိဳးအစ္ကို ကိုယ္တိုင္ ထိုးေကၽြးတာမ်ိဳး Ex နဲ႔ Date တာမ်ိဳး
လက္ရွိေနထို င္ေသာေနရာနဲ႔ အစ္ကို လိုက္ေမာင္းေနတဲ့ကားေလးက.. ဘယ္က ရ ထားလဲ? သိလ်က္နဲ႔ အစ္ကိုရယ္.. အဲဒါကမွ အစ္ကို႔ေနရာ ဘာလဲ?
ညီမက.. မပတ္သတ္ခ်င္လို႔ေတာင္ Unfriend လုပ္လိုက္ၿပီး မၾကည့္ပဲေန တာေလ.. ဘာအေၾကာင္းမွ စိတ္မဝင္စားလို႔ ခုလို ရက္နည္းနည္းၾကာမွ သူမ်ားျပမွ သိရေတာ့.. အခုလို ေအာက္ဖဲလွ န္တာေတာင္ေနာ က္က်သြား လားမသိဘူး..အစ္ကိုအသိ ဆုံးပါေနာ္..
သဇၤာျမင့္မိုရ္ ဆိုတာ.. ​ဘယ္သူ႔ ေပးကမ္းစာနဲ ့မွ အသက္ဆက္ေနတာ မဟုတ္ဘူး.. ကိုယ့္စည္း ကိုယ့္ကမ္းနဲ႔ ကိုယ့္ ကိုယ္က်င့္တရား နဲ႔ ေနလာတဲ့မိန္း မပါ.. မထိခလု တ္ ထိခလုတ္နဲ႔ –်င္ ထထမယားပါနဲ႔.. တန္ရာ တန္ရာတုံ႔ၿပ န္ေပးလိုက္ ပါတယ္ရွင့္..
ေအးခ်မ္းပါေ စေနာ္..ဪ.. မသိပဲ.. ကိုယ္ မွားမွားမွန္မွန္ ဘာညာ လာေရးေ နေသးတယ္ စုံစမ္းပါဦး အဲ့လင္မယား အေၾကာင္းလည္း.. ဘယ္အခမ္း အနားေတြ ခိုးတက္ၿပီး ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ မ ၿပီးၿပီလဲ ဆြာ အိပ္ၾကပါေတာ့ဗ်ာ.. မနက္အလုပ္ ပိတ္လည္း.. အိပ္ေရး ဝဝအိပ္ၾကပါ.. ဆိုၿပီးေျပာခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္။ Credit;
ကျေးလက် မိန်းကလေးဆန်ဆန် သဘာဝအလှတရာ‌ တွေ ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ချစ်စရာကောင်းလွန်းနေတဲ့ အိချောပို
သူမရဲ့ ရင်သွေးလေး မွေးဖွားလာမည့်အချိန်ကို ပရိတ်သတ်တွေကို အသိပေးလာတဲ့ သရုပ်ဆောင်ဘေဘီမောင်